★မြန်မာ့အလင်း★: ကုလားအချင်းချင်း ခွေးလို. . . နွားလို ရိုက်နေတာကို ကြည့်ပါဦး
ကုလားအချင်းချင်း ခွေးလို. . . နွားလို ရိုက်နေတာကို ကြည့်ပါဦး
ဟဲဟဲ.. ကောင်းခန်းရောက်ပြီ။ အရင်အပတ်တုံးက ပါကစ္စတန်စစ်တပ်က ကုလား ၆ကောင်ကို မသေမချင်း ပြစ်သတ်တဲ့ ဗီဒီယိုကို အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတခါလည်း ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကပဲ ပရိတ်သတ် မပျင်းအောင် နည်းသစ်လေးနဲ့ တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ပလီဦးထုတ်ဆောင်းထားတဲ့ ကုလားတွေကို ဒုတ်နဲ့ မသေမချင်းရိုက်သတ် ပြပါတယ်။ အင်မတန်လည်း ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ကုလားတွေကို စကာကားလုံးလေးနဲ့ပဲ ကျုပ်တို့က ပြောတာတောင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဒေါသအရမ်းကို ထွက်တတ်တဲ့ မြန်မာတွေကို တစ်ခုလောက်မေးလိုပါတယ်။ စကားလုံးလေးနဲ့မဟုတ်ပဲ ဒုတ်ကြီးနဲ့ ကုလားကို တဗုံးဗုံးရဲ့ ခွေးလို နွားလို ရိုက်နေတာ မြင်တော့ ဘယ်လိုခံစားရလဲ? မျက်ရည်မိုးတွေရွာပြီး နှပ်ချီးတွေတွဲလောင်းနဲ့ ငိုနေကြပြီလား? ၀ါးဟားဟား ။ ဖြေပေးကြပါ။ ကဲဗျာ.. အခုဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပါဦး။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 1:48 AM
bamar kalar ko mone tae. nga zaw myoe yay..
bamar ka lar ka tot luu ma that bu..
that tar ka gaw ta ma kalar yae. ta pyae. taw tway pot..